Ngokwezibalo, enye yezinkinga ezivamile - musa ukuvula isayithi. Isikhalazo abasebenzisi abaningi ongenalwazi yilesi: "Angikwazi iya kusayithi." Ungathatha izinyathelo ezimbalwa ukuze le nkinga.
Okokuqala, kufanele sibone uma kwamanye amasayithi zivulwa. Hlola ukuthi liyatholakala yini ya.ru indawo kusiphequluli, uma evulekile, bese konke kulungile, uma lingavulekile ke console (go nge imenyu "Qala"> "Run"> "cmd" futhi uthayiphe umugqa wemiyalo ping ya.ru). Uma ukhetho lokuqala ihlolwe futhi Yandex isiphequluli ayisebenzanga, futhi owesibili kulungile, bese uzama ukuqeda ukusetshenziswa okuvota. Kuye isiphequluli, izilungiselelo zalo asethwe ezindaweni ezahlukene. Ukuze i-Internet Explorer imenyu "Qala"> "Control Panel"> "Izinketho ze-Internet" > "Connections" ithebhu> "Izilungiselelo". Futhi omunye ezivamile Firefox isiphequluli yiya engxenyeni ethi "Amathuluzi"> "Okuthuthukisiwe"> "Enza ngendlela oyifisayo".
Qiniseka ukuthi ubona ukuthi ikheli lewebhu ezisohlwini ifayela C: \_ WINDOWS \_ system32 \_ abashayeli \_ njll Ngokuvamile malware ivinjelwe ngakho amasayithi, ngakho-antivirus kungenzeka zingenzeki ukuvuselela database. Uma ukukhubaza proxy akusebenzi, uzama ukukhubaza izengezo, bese ukudala kabusha amaphrofayli, lapho kungenzeka khona, noma faka isiphequluli (i-Internet Explorer). Ngokwesibonelo, e-Firefox iphrofayli okuzenzakalelayo lilondolozwe C: \_ Imibhalo ne Zimiso \_ Igama lomsebenzisi \_ Application Data \_ Mozilla \_ Firefox \_ Amaphrofayli. Uma kungasebenzi, futhi isiphequluli, futhi umyalo ping, bese idinga i test inthanethi. Uma lokhu siqondiso ayitholiwe nobunzima, kodwa ikhompyutha namanje kubonisa isiphequluli iphutha, kwakunjengokungathi uthi: "Ngeke ngikwazi ukuya site," hlola ikhompyutha yakho malicious software ngomunye-anti-virus amaphakheji Kaspersky, Avast, noma NOD32.
abasebenzisi ngokuvamile bakhononda: "? Angikwazi ukuya website unqulo wesi arab, yini okufanele uyenze". Lokhu kungaba omunye namasu igciwane. Vele kudingeka ukubeka inguqulo yakamuva ye-database ku-USB flash drive, usebenzisa kwenye ikhompyutha, futhi ubuyekeze database ngesandla. Ukuhlanza malware yalolu hlobo, kuba efiselekayo ukusebenzisa isheke ukuba ivuleke, njenge-malware, okuyinto kuthé inkumbulo kukhompyutha yakho, kalula "eliholwa antivirus ekhaleni." Ngokwesibonelo, version mahhala Avast scan angasetshenziswa kanyekanye ngaphambilini ngisho nangaphambi Windows display screen, okuyinto luyasetshenziswa efana chkdsk kokuhlola Uhlelo, okuyinto linikeza imiphumela emihle mayelana inkinga "ngeke liqhubeke likhona antivirus amawebhusayithi."
Ngakho, thina kafushane lwaveza izinkinga nge-PC yakho, okungase kuphazamise kuvulwa indawo. Kodwa kungenzeka kanzima ohlangothini umhlinzeki for ukudlula amaphakheji noma izinkinga ku yisayithi. Ukuze uqinisekise ukuthi umzila wenziwa ngendlela efanele, uthayiphe console Windows umyalo tracert igama site, futhi ungabona amakheli IP ISIZINDA okuyothi ngalo amaphakethe IP ngaphambi kokuba afinyelele esayithini okubekwe isayithi oyifunayo. Uma ezinye qophelo amaphakheji ungagijimi isikhathi eside, console ubonisa lwenkanyezi kungase kudingeke etholakalayo isisetshenziswa ezithile ezibalulekile, efana VKontakte. Le nkinga ingase kubangelwe ukuxhumeka kuhamba kancane, kodwa lokhu futhi umbuzo izinga intanethi yakho bese i-ISP yakho. Khona-ke kungcono nabosekelo ukuxazulula le nkinga. Umane nje utshele Uchwepheshe umhlinzeki: "Angikwazi iya kusayithi," futhi uzohlola uhlelo lwaso ukuseviswa umzila.
Asikabi inketho nge okuthiwa DDOS isayithi lokuhlasela iseva abathenge izimbangi noma bayizitha isayithi. amasu wabo lenqwaba izicelo kwiseva, okuyinto engakwazi ukuba baphendule nokumisa ngesikhathi i attack enjalo. Ukuze afeze le misebenzi ukuheha kubaduni, botnets, okuyizinto izinkulungwane eziningi amakhompyutha ngamagciwane ngokuhlanganisa elawulwa kusuka isikhungo esisodwa. Ngakho, kulesi sikhathi ufinyelela isayithi abasebenzisi njalo kunzima kakhulu, uma kungukuthi akwenzeki.
Kufanele kuqashelwe ukuthi eRussia ngo-November 2012 siqala ukusebenza komthetho amasayithi sinqatshiwe. Ngakho-ke, abaningi service Internet ayaqala umsebenzi kulungiselelwa ukwalela amanethiwekhi zabo izingosi ezinjalo, ethula Deep Iphakethe Ukuhlolwa uhlelo. Futhi abasebenzisi eziningi maduze ekuthukuthelisweni: "Angikwazi iya kusayithi, okuyinto ibonakala ingekho ingozi emphakathini akuyona." Ngakho kukhona kungenzeka ukuthi indawo ngokuthi maduze bavinjelwe ziyingozi. Uma ngempela kudingeka ukufinyelela, zama ukufinyelela kuwo usebenzisa i-proxy engaziwa noma nge-RDP usebenzisa workstations elise phesheya.
Harrington Emerson nezimiso zakhe 12 zomsebenzi umkhiqizo
A ukuqubuka abomvu emzimbeni wengane: sifo noma ukudlula ngokwayo?